Dawladda Qatar Iyo Farmaajo Oo La Sheegay Inay Aragti Ahaan Kala Fogaadeen – somalilandtoday.com
Dawladda Qatar Iyo Farmaajo Oo La Sheegay Inay Aragti Ahaan Kala Fogaadeen
(SLT-Hargeysa)-Dawladda Qatar iyo dawladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay soo kala dhex gashay xurguf diblomaasiyadeed oo aan weli banaanka u soo bixin.
Xurguftan ayaa ka dhalatay ka dib markii ay shirkadda Talyaaniga ah ee ENI qodis shidaal ka bilowday dhul badeedka ay Kenya iyo Soomaaliya isku hayaan, iyadoo ay Kenya shirkadan Talyaaniga ah ogolaansho u siisay inay dhulkan muranku ka taaganyahay ka bilowdo qodis.
Shirkadda Qatar petroleum ayaa saami ku leh shirkadan Talyaaniga ah, waxaanay saamiyada Qatar ee shirkadani u badantahay hawlgalo shidaal baadhis ah oo ay shirkadan Talyaaniga ka wado dalal ka tirsan qaaradda Afrika.
Dawladda Soomaaliya ayaa u aragta dawladda Qatar inay muranka xuduudka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ay la safatay Kenya maadaama oo ay shirkadda ENI ee ay Qatar saamiga ku leedahay ka bilowday dhulka lagu muransanyahay qodis.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa khilaafka wadamada gacanka Carabta wuxuu la saftay dawladda Qatar, waxaanu ka diiday isbahaysiga Sucuudiga ee UAE ay ka mid tahay inuu xidhiidhka u jaro dawladda Qatar.
Hase yeeshee sannado ka dib hadda waxa muuqata inay Qatar iyo Farmaajo kala durkayaan, waxaanu Farmaajo toddobaadkan socdaal ku tagay dalka Sucuudiga, iyadoo uu Sucuudiguna Jimcihii Muqdisho u diray Wasiir-dowlaha Sacuudiga ugu qaabilsan Arrimaha Afrika, Axmed Bin C/casiis Qadaani oo Farmaajo soo gaadhsiiyay casuumad uu u soo diray boqorka Sucuudiga oo ku saabsan ka qayb galka shir dalalka kaabiga ku haya badda cas iyo gacanka Carabta oo qabsan doona shirweyne.